တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပြီးခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း မဟာဘွဲ့ ၆ ဒသမ ၅ သန်း ချီးမြှင့်ခဲ့ ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဆန်ရှီးပြည်နယ် ရှီးအန်းမြို့၌ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ကျင်းပသည့်နေရာမှ ထွက်ခွာလာသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ၎င်း၏ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း မဟာဘွဲ့ ၆ ဒသမ ၅ သန်းကျော် နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ ၆၀၀,၀၀၀ ကျော် ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။တရုတ်နိုင်ငံက ၎င်းတို့၏ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပညာရပ် နှင့် အဓိကဘာသာရပ် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုအား တိုးတက်စေရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုသည် နိုင်ငံ နှင့် ပါတီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိသည့် အားကောင်းသောလူစုတစ်စုအား ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်နည်းပြဆရာများ၏ အရေအတွက်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၂၉၈,၀၀၀ ဦးမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၅၅၇,၀၀၀ ဦး အထိ တိုးလာခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့ပြီး ပါရဂူဘွဲ့နှင့်အတူ အချိန်ပြည့်ဆရာများ၏ အချိုးမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးလာခဲ့သည်ဟု ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
6.5 mln master’s degrees awarded in China over past decade: ministry
BEIJING, June 14 (Xinhua) — Over 6.5 million master’s and more than 600,000 doctorate degrees have been awarded in China over the past decade, according to the Ministry of Education.
China has made continuous efforts to improve the composition of disciplines and majors concerning its postgraduate education, the ministry said atapress conference Tuesday.
This achievement has providedastrong pool of talent for the development of the Party and the country, the ministry noted.
The number of tutors has increased from 298,000 in 2012 to 557,000 in 2021, said the ministry, adding that the proportion of full-time teachers with doctorate degrees increased from 60 percent in 2015 to 72 percent in 2020. ■
Photo – A man picks up his daughter who leavesavenue of the postgraduate entrance exam in Xi’an, northwest China’s Shaanxi Province, Dec. 26, 2021. (Xinhua/Tao Ming)